ဘေဘီမောင်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးအဖြစ်တွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်…. - Zeekwat Hot News
ဘေဘီမောင်ရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေးအဖြစ်တွေ့ရတဲ့ပုံရိပ်….
September 7, 2019097
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဘေဘီမောင်ကတော့ ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတဲ့သူလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကို အမြဲကြိုးစားနေပြီး ပရိသတ်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ နေရာတစ်နေရာ ရရှိဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo : baby Maung fb
ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို မျှဝေပေးလေ့ရှိတဲ့ ဘေဘီမောင်ကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ ရိုက်ကူးရေးက ဓါတ်ပုံတွေကို မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီမောင်ကတော့ “ဆရာမလေး ခလေးတွေအချိန်ပိုသင်ဖို့ကျောင်းသွားပီနော်” လို့ရေးထားပြီး ပရိသတ်တွေကို ဓါတ်ပုံတွေ မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကျောင်းဆရာမလေးအဖြစ်တွေ့ရတဲ့ ဘေဘီမောင်ကတော့ သူမရဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားလိုက်ပြန်ပါပြီ။
Source : baby Maung fb
ပရိသတတြှရေဲ့ အားပေးခစွခြငမြှုတှကေို ရရှိထားတဲ့သူတစယြောကဖြှစတြဲ့ ဘဘေီမောငကြတော့ ရိုးသားပှငြ့လငြးတဲ့ သူလေးတစယြောကဖြှစတြာကှောငြ့ ပရိသတတြှအခေစွပြိုရတဲ့သူလေးတစယြောကဖြှစပြါတယြ။ သူမကတော့ အနုပညာအလုပတြှကေို အမှဲကှိုးစားနပှေီး ပရိသတရြဲ့ ရငထြဲမှာ နရောတစနြရော ရရှိဖို့အတှကလြညြး ကှိုးစားနတောဖှစပြါတယြ။
ဖစဘြေုတပြေါမြှာ အနုပညာလှုပရြှားမှုတှကေို မွှဝပေေးလရှေိ့တဲ့ ဘဘေီမောငကြတော့ ဒီကနမှေ့ာလညြး သူမရဲ့ ရိုကကြူးရေးက ဓါတပြုံတှကေို မွှဝပေေးလိုကတြာဖှစပြါတယြ။ ဘဘေီမောငကြတော့ “ဆရာမလေး ခလေးတှအခွေိနပြိုသငဖြို့ကွောငြးသှားပီနြော” လို့ရေးထားပှီး ပရိသတတြှကေို ဓါတပြုံတှေ မွှဝပေေးလိုကတြာဖှစပြါတယြ။ ခစွစြရာကွောငြးဆရာမလေးအဖှစတြှရေ့တဲ့ ဘဘေီမောငကြတော့ သူမရဲ့ ရိုးရှငြးတဲ့ အလှနဲ့ ပရိသတတြှကေို ဖမြးစားလိုကပြှနပြါပှီ။
ချစ်စရာသမီးလေးရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပရိသတ်ကို မျှဝေလိုက်တဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်ပုံရိပ်…..
ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိန်သွယ်သယောင်မြင်စေမယ့် လီမွန်သီးရဲ့အနံ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….